२०७६ चैत २१ शुक्रबार १७:५१:००
न्यूयोर्क, कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएको थाहा पाउँदा त्रासले श्वास नै अबरुद्ध भएको अनुभव टिफानी पिन्क्नीको दिमागमा अझै ताजै छ । न्यूयोर्क शहरकी यी ३९ वर्षीया आमा निको मात्र भइनन् उनले अरु बिरामी बचाउने सन्दर्भमा अर्को नयाँ इतिहास पनि रचिन। उनले अन्य गम्भीर बिरामीहरूको उपचारमा सहयोग पु–याउन आफ्नो रगत दान गरेकि छिन्। पिन्क्नीले एसोसिएटेड प्रेसलाई भनिन्, “मेरो रगतमा सायद कोरोनाको उपचारसँग जोडिएका प्रश्नहरुको उत्तर हुन सक्दछ । यो कुरा थाहा पाउँदा मलाई अति खुशी लागेको छ ।”
न्यूयोर्कको माउन्ट सिनाई अस्पतालका अध्यक्ष डा. डेभिड राइखले भने, “अहिले यो विधिका बारेमा चौतर्फी चासो छ, र मानिसहरु यो विधि अपनाउन भनिरहेका छन् ।” यही अस्पतालमा टिफानीको उपचार गरिएको र निको पनि भएकी थिइन । “यो रोग लागेपछि मानिसहरु निःसहाय अनुभव गर्दछन् । कतिपयले जीवनको आशा मार्छन् । रक्तदानले अरु हजारौंको जीवन बचाउन सक्ने सम्भावना छ ।” उनले भने, “उपचार चलिरहेको बेला, हामी केवल यो आशा गर्छौं कि यसले काम गर्छ ।”
“जब नयाँ रोगहरू देखा पर्दछन् र वैज्ञानिकहरू खोपहरू वा औषधिहरूको लागि दौडिरहेका हुन्छन् त्यसबखत यो “एक द्रुतगतिको पहिलो उपाय हो जुन हामी चाँडै राख्न सक्छौं,” सेन्ट लुइसस्थित वासिङ्टन विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिसिनका डा जेफ्री हेन्डरसनले बताए । यस विश्वविद्यालयले प्लाज्माको सम्भावनाका बारेमा देशव्यापी अध्ययनको नेतृत्व गरिरहेको छ । यो “आफैँमा उपचार पक्कै होइन, तर यो रोगको गम्भीरतालाई कम गर्ने एक तरिका हो,” हेन्डरसनले बताए ।
चिकित्सकहरुलाई अद्यापि कोरोनाभाइरसबाट निको भएका व्यक्तिको एन्टिबडीले कहिलेसम्म काम गर्दछ भन्ने थाहा छैन । तर अहिलेका लागि, “तिनीहरू सडकमा सबैभन्दा सुरक्षित व्यक्तिहरू हुन्” सियाटलमा ब्लडवर्क नर्थवेस्टका डा. रेबेका हेलीले बताए। यो संस्थाले रक्तदाताको पहिचान गर्दछ । “हामी उनीहरूबाट एन्टिबडी प्राप्त गर्न दबाब भने दिँदैनौं ।”
निको भएका र रक्तदान गर्न चाहने दाताहरू रक्तदान केन्द्रमा आउनै पर्छ भन्ने छैन । सर्वप्रथम उनीहरुले आफूलाई कोरोनाभाइरस नभएको प्रमाणित गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि उनीहरुको केही हप्ता परीक्षण गरी भाइरस नरहेको सुनिश्चित गरिने छ । तिनीहरू रक्तदानका लागि अन्य आवश्यकताहरू पूरा गर्न पर्याप्त स्वस्थ पनि हुनु पर्दछ । साथै उनीहरूको एन्टिबडीको स्तर पर्याप्त छ कि छैन भनेर जाँच गर्न थप परीक्षण लिइन्छ । “तपाईं त्यस्तो व्यक्तिबाट प्लाज्मा लिन सक्नुहुन्न जसको औसत रोग–प्रतिरोधात्मक क्षमता छ । त्यो सहयोगी हुने छैन,” राष्ट्रिय स्वास्थ्य इन्स्टिच्यूट ९एनआइएच०की डा. जुली लेजरवुडले बताए ।
चिनियाँ चिकित्सकहरूले गत हप्ता कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा दिएका पाँच जना बिरामीमा केही हप्ता पछि केही सुधार भएको बताएका छन् । तर तिनीहरूलाई अन्य थेरापी पनि दिइएको थियो, र व्यापक अध्ययन बिना प्लाज्माले काम गरेको छ छैन भन्न सकिन्न । कन्भलेसेन्ट प्लाज्माले काम गरेको छ छैन भन्ने जाँच्न बिरामीहरूको नियमित हेरचाह, परीक्षण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ ।
तर टिफानी जस्ता व्यक्तिहरूले गर्ने रक्तदानलाई रक्त केन्द्रहरूले कति चाँडो प्रशोधन गर्न सक्छन् भन्नेमा पनि निर्भर हुनेछ ।
मार्चको पहिलो हप्ता उनी बिरामी परेकी थिइन। उनलाई शुरुमा ज्वरो आएको थियो । उनलाई श्वास फेर्न कठिन हुनुका साथै लामो श्वास लिँदा छातीको दुःखाई अनुभव भएको थियो । एकल आमा टिफानीलाई आफ्ना ९ र १६ वर्षका छोराहरुको चिन्ता थियो । “मलाई मेरो बाथरूमको भुइँमा रोइरहेको र प्रार्थना गरेको याद छ,” ३९ वर्षीया टिफानीले सुनाइन ।
त्यसपछि उनी परीक्षण र उपचारका लागि माउन्ट सिनाई अस्पताल गइन । उनी अस्पतालमा ठीक भइन, र अस्पतालले रक्तदान गर्नुहुन्छ भनी उनलाई सोध्यो । उनले अस्पतालको अनुरोधलाई तत्कालै स्वीकाईन । “यो अरू कसैका लागि आशाको एक प्रकाश हो,” उनी आफ्नो रगतले अरुको जीवन बाँचेको खबर सुन्न व्यग्रताका साथ पर्खिरहेकी छन् ।